Ungathabatha njani isigqibo esisisigxina malunga nencoko yegama elingundoqo kwi-Amazon?
Ukukhetha i-intanethi yegama eliphambili le-intanethi kwi-Amazon yokucwangcisa ukulungiswa komsebenzi ngumsebenzi onzima kakhulu. Ukuqwalasela ukuba uluhlu lwemveliso yakho ye-SEO luqhubela phambili ngokubanzi malunga nophando olunzulu lwegama elingundoqo, masiphumelele ngokukhawuleza kwimiba ephambili ye-ecommerce optimisation - ukuba uthathe isigqibo esineenkcukacha kwaye uthathe isigqibo esifanelekileyo. Kwaye andiyi kunika nayiphi na ingcebiso ngokuthe ngqo malunga nayiphi na ithuluzi elingundoqo eliku-intanethi kwi-Amazon. Ndiyathetha ukuba kukuphela kwakho ukugqiba oko kuza kulungelelanisa isitoregi sakho sokuthunyelwa kwezinto zokuhamba. Hlalani nikhumbule iingcamango ezilandelayo kunye neengcebiso ezilula ndandisanda kulungiswa kwiminyaka emibini edlulileyo kwishishini, kunye namava am namava enxulumene nesifundo.
Hlela izinto eziphambili ze-SEO ezilindelekileyo kubaphulaphuli abajoliswe kuyo
Ngaphambi kokuba nantoni na enye, masijongane nayo - i-Amazon SEO inezinto ezininzi ezahlukeneyo ezingafunekiyo ngendlela efanayo nokukhangela kwi-intanethi ngokuqhelekileyo neGoogle. Kuthatyathwa ngokubanzi, umba ogqithisileyo kukuba ukulungiswa kwe-Amazon kukugqithiseleyo kwaye kunokwenziwa ngokubanzi, okwenza ukubheja ngokukodwa kwiintengo zokuthengwa komthengi kunye nemveliso yamagama athile ngokukodwa ngokujoliswe ngqo ngabathengi bakho.
Yazi i-Intenethi ye-Shopper kwi-Amazon
Ukudala uluhlu lwakho oluphambili lwamagama akwii-key-winning that is not difficult as you think. Enyanisweni, akukho mfuneko yokukhawuleza ukuzama ukufumana i-intanethi yegama elingundoqo kwi-intanethi ye-Amazon. Ndiyathetha ukuba ulunge ngakumbi ukuqala uphando lwakho olunzulu ngokusebenzisa iziseko ezisemgangathweni, umzekelo, eloluhlobo oludala lweGoogle Keyword Planner. Ngokukrakra, oko kuya kuba yinto enkulu yokukhahlela ukuze ufumane umfanekiso opheleleyo kuyo yonke imigaqo yokukhangela kunye nesigama esisisigxina esiza kuxhomekeka kuso.
Landela iSakhiwo esiPhambili se-Amazon Content SEO
Nanku xa kuya kufuneka ukuba uthathe isigqibo sakho sokugqibela kwisixhobo segama elingundoqo kwi-Amazon. Kwakhona-andiyi kukunika isincomo esicacileyo okanye ukubonisa nayiphi na isisombululo. Khangela nje kwiGoogle kweso sixhobo esibonakalisiweyo nesisebenzisekayo ngempendulo yabathengi abafanelekileyo - kwaye uyenziwe. Into enokuthi kukho ubuninzi beentengiso ezahlukeneyo (mhlawumbi ekufikeleleni okuvulelekileyo, okanye ngokubhaliselwe ngokuhlawula) ukwenzela ukuba uqhubeke ne-ecommerce research keyword. Kulula ngoku, ngamanye amaxesha amaninzi amanqaku angundoqo okufumana amagama okanye amagama angama-long-tail of yours in your list list - aphelelanga ukuphumela ekuzuzeni iinjongo zengingqi (ukungabhekiseli kwinkqubela phambili ekulindelekileyo kwizinga eliphezulu lokuguqulwa).
Yenza umehluko phakathi kweentlobo zamagama angundoqo
Musa ukuphengulula ixesha lakho ekuphandeni lonke uluhlu lweemigqaliselo zokufuna umsila omthembisayo.Khumbula - ezo zibophelelo ezidibanisa amagama amaninzi kunye namazwi ngokuqhelekileyo anezinga eliphantsi lokuncintisana kwegama elingundoqo. Ngoko ke, utyalomali ixesha lakho ekufumaneni intsebenziswano yokwenza uphando olwenziweyo luphantsi koxinzelelo lwabalandeli bakho abasondeleyo - eyona nto iphambili kwimpumelelo yakho yorhwebo kwi-Amazon. Emva koko, nantsi enye into ebandayo ebandayo - malunga nama-70% e-Amazon product search searches aqikelele ukuba eze ngokukodwa ngemibandela yosesho ende. Kuthetha ukuba ixesha lakho kunye nemigudu eyichithwa ngaphaya kwayo iya kuhlala ihlawule, ngokuqinisekileyo Source .